Ekwesiri iji nlezianya mee nhazi nke ubi a. Agbanyeghị, ọbụlagodi mgbe onye ọrụ ahụ enweghị nnukwu ubi ọ nwere, mana naanị obere ogige, ma ọ bụ ọbụna mbara ihu ma ọ bụ mbara ala, ọ nwekwara ike ịmepụta mpempe akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. Ndabere ya ga-abụzi akụwa n'ubionye nhọrọ buru oke ibu.
Kedu ite nke ubi a ga-ahọrọ, na-eburu n'uche ihe ha ma ọ bụ nha ha?
Podị akụwa n'ubi
Mpempe ubi na-enweta ubi n'ọtụtụ nhọrọ dị ukwuu. Ha dịgasị iche n'ụdị, nha na ihe, yabụ ihe niile dabere n'echiche nke oghere mbara. O buru na ekewa ite ahu dika ihe ha si di, agaaa ha:
Osisi ogwu ubi
Osisi ogwu ubi - dị ka amaara nke ọma, osisi bụ akụ sitere n'okike, ekele nke ite osisi ji akwọ osisi ga-adabara ogige ọ bụla ma ọ bụ mbara ala n'enweghị ihe ewepụtara. Ka emechara, ọ bụkwa ihe na-adọrọ mmasị ịke na egosipụta ọtụtụ ihe. Ọ bụ ya mere ite ji arụ ogwe osisi, rattan ma ọ bụ teknụzụ-rattan na teknụzụ, ga-eme ka ohere a zuo oke.
Efere akụwa n'ubi
Efere akụwa n'ubi - A na-ejikarị ite akụ na-agba ahịhịa n'ámá. Agbanyeghị, enwere ike itinye ha na ubi ụlọ, mbara ihu na mbara ala. Dị Mkpa, site n'echiche nke iji, akụ n'ubi ahihia dị arọ, yabụ n'otu aka na-eguzogide ikuku nke ikuku, na aka nke ọzọ siri ike ịkwaga. Ọ bụrụ na ndị a bụ obere oghere, ha nwekwara ike ijupụta n'ọdịdị ha. Mgbe ahụ ọ ga-aba uru itinye akụ na pịrị apị nke nwere usoro, ma ọ bụ ite na-e concreteomi naanị ihe.
Epeepe ogige plastik
Epeepe ogige plastik - a na - eji ụdị ite a tumadi ọnụ ala. Na mgbakwunye, ọ bụ nnukwu ngwaahịa dị iche iche (gụnyere ite akụwa n'ogige plastik buru ibu na obere, obere ite ọkụkọ na nke dị elu, paịsị ubi oge a na kpochapụwo). Ọtụtụ mgbe ha na-abụ ọkụ ma yabụ na-adị mfe iburu. N'aka nke ozo, ikuku nke ikuku na - emebi ha, ya mere - karie nnukwu ite plastik - o kwesiri ka itinye aro ozo. Oghere na ite nke plastik ahụ ga-aba uru, nke ga-ahụ na hydration nke osisi a kụrụ n'ime ya kwesịrị.
Etu ite n'arọ
Etu ite n'arọ - Obi abụọ adịghị ya, ite ite osisi seramiiki (nke ukwu na nke nta) bụ otu n'ime ite ndị a na-ejikarị eme ihe, n'ihi na ụdị nhazi dị mma. Ha dị mfe ịkwaga na mgbakwunye na ha na-eguzogide ọnọdụ ihu igwe. Nke kachasị mkpa, n'ihe banyere nlekọta osisi, ha na-enye ha ikuku kwesịrị ekwesị. O bu ihe nwute, ite ugbo osisi seramiiki adighi adi nma ma di nfe, dika ima atu ma obu ibu.
Ogwe osisi ubi a gbara ogige
Ogwe osisi ubi a gbara ogige - gbacha gbacha gbacha gbachapụrụ agbachasị pụrụ iche, mana ite akụ na-akwụ ubi, nke a na-ejikarị n’ebe ndị mmadụ na-anọ (dịka ili.) Ihe eji eme ya bụ okwute okwute nwere ike ịbụ ihe okike ma ọ bụ mabul.
Ogwe osisi ubi
Ogwe osisi ubi - Mpekere metal bụ obere ngwaahịa, na-ejikarị aluminom ma ọ bụ galvanized steel, nke na-echebe ha pụọ ​​na corrosion. Na mgbakwunye, ha bụ ite akụ na-eguzogide ikuku nwere ike ịhapụ n'èzí n'afọ niile. Ekwesịrị ilebara ha anya dị ka ite ubi nke oge a.
Efere ite na-ete Technorattan
Efere ite na-ete Technorattan - ezigbo ite osisi ifuru maka ubi akwa, mbara ihu, mbara ala na gazebos na ụdị ọgbara ọhụrụ. Ha na-enye nhọrọ buru ibu n'ihe gbasara udi na nha, nke nwere ike ịbụ mkpuchi maka ite aka nri nke ihe dị iche. Ọdịiche dị n'etiti rattan na poly rattan bụ, n'etiti ihe ndị ọzọ, iguzogide mmiri na ụzarị anyanwụ. N'ezie, poly rattan dị mma na nke a.
Hụ kwa: Ogige, ogige na bench dị
Ma ọ bụ ikekwe ite akụwa obodo?
Nhọrọ nke ite maka ubi buru ibu, ọkachasị ebe ọ bụ na ụfọdụ n'ime ubi ị nwere ike ịgba ọsọ na mbụ, otu ụdị akụwa obodo. N'okwu a, ndị a na-abụkarị ite nwere nnukwu ma ọ bụ opekata mpe, n'ihi ya, ha ga-arụ ọrụ nke ọma n'ọtụtụ sara mbara, n'agbanyeghị na ọ bụghị iwu. Akụkụ ifuru nke obodo ahọpụtara nke ọma ga-achọ ogige ahụ mma ma tinye ya na agba.
Dịka iwu, ọ bụ usoro ọdịnala, nke pere mpe, ekele nke ọ ga-adaba n'ụzọ zuru oke na nhazi nke ubi, karịsịa na ụdị ọgbara ọhụrụ. N'aka nke ọzọ, ha bụ ite ji chọọ mma, n'aka nke ọzọ, ha na-arụ ọrụ na arụmọrụ ndị ọzọ:
ite eji agba ifuru.
N'ụzọ dị otu a, ha na - ejikọ aesthetics na arụmọrụ bara uru. Ite ahụ ga-abụ ebe dị maka ifuru, ahịhịa ma ọ bụ obere osisi, ma dịkwa ka tebụl, oche, ma ọ bụ mgbe chi bọsịrị, ọ ga-aka akara ụzọ nkwukọrịta dị n’ubi ahụ.
Kedu ite nke ubi ị ga-ahọrọ?
Yabụ na a na-ahụ ya nke ọma na enwere nnukwu nhọrọ akụwa ite n'ahịa, yabụ onye ọ bụla kwesịrị ịchọta ihe ziri ezi maka ubi ha, mbara ihu ma ọ bụ mbara ala. Ihe niile dabere na nhazi nke oghere, dịka ọmụmaatụ ọdịnala, nke ọhụụ ma ọ bụ avant-garde. Fọdụ ga-ahọrọ ite osisi, ndị ọzọ ga-ahọrọ ite ọla ma ọ bụ okwute. A na-atụ aro obere ite maka mbara ihu, mana nnukwu ite n'ubi ga-adabara mbara ala. Marakwa nke ahụ a nwere ike iji ite rụọ nke ọ bụla mma, ọbụnadị ọtụtụ ihe ndị ọzọ a na-ahụkarị, agbụ, na ọbụna eserese.
Maka ọtụtụ, ọnụahịa ahụ bụkwa nhọrọ nlebara anya. Nke a apụtaghị na you ga-agbanye na ite e ji arụ ubi. Ahịa (dịka. Na Formdị Ọdịdị Obodo) bụ ezigbo ohere iji zụta akụ mara mma nke ejiri ihe dị elu rụọ ọrụ na ọnụ ahịa mara mma. Youzọ ị nwere ike isi zọpụta ọtụtụ, site n’ịzụrụ ọnụ ala akụwa n'ubi nke emere, na ọbụna ite okwute.
Ihe nchoputa ozo bu osisi nke onye ọrụ choro iku nkpuru ahihia n’ubi ya. Ọ bụghị mgbe niile ka ha ga-abụ nnukwu ite n'ubi. Nta, Obere ite ga-arụ ọrụ ga-arụ ọrụ nke ọma na ịrị osisi na rhizomes. N'ime ndị buru ibu a na-akụ osisi na osisi dwarfna ite n'ọkwa di iche iche Ogwu.
akụwa na-akụ ihe nke ahịhịaakụwa na-akụ ihe nke ahịhịaite eji akụ osisiakụwa obodoakụwa obodo akụwaakụwa n'ubiakụwa na-akụ ihe nke ahịhịaite eji arụ ọrụ ugbonnukwu ite ite osisiite eji akụ osisiakụwa nnukwu ubiakụwa nkume ogigeOgwe osisi ubiEfere akụwa na-eguzogide ntu oyiite eji akụ n'ubi n'oge aakụwa n'ogige plastiknnukwu ite akụ na-akụ plastikire ite akụ na-ereakụwa na-akụ ihe nke ahịhịaOgwe akụPọtumu Technorattanite eji akụ osisiakụwa nnukwu ubiite ifuru pụrụ icheite eji akụ n'ubi n'oge aite n'ubi di ogologo